UGIXABEZWE NGESIPHO SENDLU UGOGO ONEMINYAKA ENGU-70 WAKWAMAPHUMULO – Sivubela intuthuko Newspaper
UGIXABEZWE NGESIPHO SENDLU UGOGO ONEMINYAKA ENGU-70 WAKWAMAPHUMULO
LAPHA kungesikhathi uNgqongqoshe wezokuHlaliswa kwaBnatu KwaZulu Natl, uMnuz Jomo Sibiya edlulisela umuzi abawakhele uGogo uMsweli ona-70.
USWELE amaphiko okundiza ugogo oneminyaka engu-70 yobudala ngesikhathi uNgqongqoshe wezokuHlaliswa Kwabantu kanye nemisebenzi yoMphakathi esiFundazweni iKwaZulu Natal, uMnuz Jomo Sibiya emgixabeza ngendlu entsha ceke.
Loyo nguNkk Msweli wakwaMaqumbi, KwaMaphumulo Ogwini olusenyakatho yesiFundazwe iKwaZulu Natal. UGogo uMsweli ubekade ehlala nabazukulu bakhe abathathu kanye nesizukulwane sakhe endlini ewurawondi ebibukeka ingekho nje nhlobo esimweni esigculisayo.
“Angazi ngingachaza ngithini nje indlela engijabule ngayo kayicahazeki. Impela ungafunga ukuthi ngilele ngiyaphupha ngisazophaphama kuthiwa ayikho yonke lento engiyibonayo namhlanje. Impela mkhulu uNkulunkulu esimkhonzayo. Ngangingazi ukuthi kukhona uMsamariya olungileyo oyongenzela into enkulu kangaka,’’kuzibongela uGogo Msweli.
Ngaleli langa kuhlalukile ukuthi umuzi owakhelwe uGogo uMsweli wakhiwe ngabantu abasha besifazane abasendimeni yezokwakha nababobakala benekusasa eliqhakazile kakhulu kuwona lo mkhakha ngaphambilini owawubonakala unabantu abaningi besilisa.
Ukwakhelwa kukaGogo uMsweli le ndlu kungaphansi kohlelo olumqoka kakhulu lokwakhiwa kwezindlu kule ndawo olubizwa ngokuthi ikwamaQumbi Rural Housing Projects Phase 1. Luqhubeka kuWard 4. Kuze kube yimanje sekwakhiwe izindlu ezingu-1500 ngaphansi kwalolu hlelo. Sekusetshenziswe imali eshisiwe elinganiselwa ku-R17, 6 million.
UMnyango wezokuHlaliswa kwabantu esiFundazweni iKwaZulu Natal uzibophezele kakhulu ekutheni ekutheni bathole ukwesekwa abakudingayo bonke abantu abasha abakulo mkhakha. Kuvelile ukuthi bangaphezulu kuka-30 abantu abasha ababandakenyekayo kulo hlelo. Phakathi kwabo kubalwa namantombazane angu-16.
Abafundi okuyibona abaqashwe ngokugcwele ekutheni kwakhiwelwe abantu bakwamaQumbi izindlu banikezwe izitifiketi ngalo lolu suku.
“Ukuthuthukiswa kwamakhono abantu abasha ngezinye zezinyo ezimqoka kakhulu KwaZulu Natal. Ngalolu hlelo sifuna ukubona abantu abasha kuba yibona abaphambili kulona,’’kuchaza uNgqongqoshe uSibiya.
Ukugqokiswa kwemiyezane obekuhambisana nokunikezelwa kwezitifiketi kubantu abasha bakule ndawo bekukade kuhlelwe uMnyango wezokuHlaliswa kwabantu KwaZulu Natal ngokubambisana nawo uMkhandlu waKwaMaphumulo kanye nesiFunda, iLembe.
UMKHANADLU WETHEKU UHLONISHWE NGENDONDO EBALULEKILE KAKHULU